resort Italy Rimini, waziwa ngokuyinhloko emabhishi ayo sandy, kanye yezitolo inzuzo. Kulesi edolobheni athuthukile ingqalasizinda izivakashi Yiqiniso, nje emihle. amahhotela ukhululekile lwezigaba ezahlukene zakhiwa eziningi. Fiorana 3* (Римини). Abaningi Russian tour opharetha abasebenza, isibonelo, ehhotela isabelomali Ihhotela Fiorana 3 * (Rimini). туристов о ней в сети имеются разные — как хорошие, так и не очень. Izibuyekezo ngakho kunethiwekhi zihlukile - kuhle noba alilihle.
indawo Ihhotela sika, izivakashi eziningi uzizwe ngempela elula. Leli hhotela itholakala ngqo emzini - Rimini e Marina Centro. Eduze iqalisa eziningi izindawo zokudlela, amathilomu kanye nezitolo. Ngo lemizuzu eziyishumi kusukela Amahhotela Fiorana 3 * (Rimini) futhi mlando city centre. Lapha ehhotela izivakashi nekugcamisa nokuzwa yezakhiwo kanye namasiko. Rimini Isiteshi Sesitimela lemizuzu-20 kusukela ehhotela.
Ibanga ukusuka olwandle kuze kube hhotela engaba ngu-200 metres. Ngo okuwuhambo lwemizuzu engu-5 kusukela ehhotela ikhokhwe ebhishi yangasese. Ngaphambi ehhotela umphakathi nezivakashi kufanele ahambe imizuzu engu mayelana 25-30 noma iya ngebhasi. Bus, kanye esiteshini sesitimela, etholakala eduze ngokushesha ehhotela. Ngakho, uma ufisa ungaya cishe kunoma iyiphi idolobha e-Italy.
Eduze ehhotela, ekhoneni, umsebenzi uye wathola Izibuyekezo ezinhle kakhulu uqhosha esitolo omkhulu "Billa". Lapha, uma kunesidingo, ungathenga noma eliphi izimpahla brand - .. Ukudla, izinto eziyizikhumbuzo lolwandle izesekeli, electronics, izingubo, njll At amamitha 50 kusukela ehhotela kukhona okuhle kakhulu, ngokusho izivakashi eziningi, yokudlela Sabbioni. It kungenziwa yayala izitsha nje kuphela esiphundu zendawo European, kodwa iwayini umane oluhle kakhulu ekwenzeni lokhu kusungulwe.
Kuyinto ehhotela Fiorana Ihhotela 3 * (Rimini), kobufakazi kusuka izivakashi mayelana nokuthi iziphi izinhlelo, ngeshwa, azikho ezinhle kakhulu, yesimanje isakhiwo ezine storey nge EGCEKENI elincane. Le ndawo ehhotela lizungezwe ukukhanya kocingo olubiyile futhi kahle landscaped. Ukuze uthole ngqo ngaphakathi ehholo lehhotela, kufanele uye ngesango elincane uhambe izitebhisi izinyathelo ezimbili. Ngaphandle, isakhiwo sale ehhotela ubukeka ngempela lemukelekako. Ukuze kokuphothula izindonga akhethiwe izinto sasivumela ezibizayo futhi emuhle. Yonke azungezwe we umgwamanda osungulwe zezimbali nazo zonke izinhlobo zezitshalo tropical zokuhlobisa. Emnyango ehholo kufakwe Lihle isihlahla kancane entendeni kubhavu.
Yangaphandle kuleli hhotela, ngakho impela. Nokho, kwi design ingaphakathi kuyafana ukusho, ngeshwa, abakwazi. Ukwakhiwa kabusha ihhotela, nahlulele yi izibuyekezo izivakashi wawuba isikhathi eside kakhulu. Ngakho-ke, ihhotela libukeka ongaphakathi unpresentable ngokuphelele. Ezinye izivakashi ngisho wayibiza ngokuthi bomzhatnik European. 'Hwebani egumbini kule eziyinkimbinkimbi, ngeshwa, kancane kakhulu. Kodwa endaweni yokwamukela izivakashi elinde lula izivakashi nge SOFAS encane esithambile.
Leli hhotela kungokwalabo isigaba ezintathu-star. Nokho, ngokuvumelana izivakashi kakhulu, kuyacaca ukuthi ngeke kuze kube yileso isimo. Kodwa iphileke kule eziyinkimbinkimbi ushibhile kakhulu kunezinye eziningi nezinye ezintathu-star e-Italy.
Ihhotela 3 * Ihhotela Fiorana (Rimini), izithombe amakamelo nezindawo lapho ethulwa ekhasini isebenza kuhlanganise uhlelo usizo kwabokufika Afrika. Lokhu kwaba izivakashi wakhe wesikhathi esizayo, futhi-ke, kufanele wazi. Abanikazi Ihhotela kuyinto Pappano umndeni. Isonto uhambo indawo yokuhlala ehhotela ekwazile amaholide Russian nje angaba yizinkulungwane 20. Ruble, okuyinto Yiqiniso, kuncane kakhulu.
Ihhotela Igumbi Isikhwama
Uma wayefisa, izivakashi ezifuywayo abanquma ukuchitha iholide e Rimini kungajatshulelwa Amahhotela Fiorana 3 * (Rimini), omunye amane okuphakanyiswe amakamelo wakhe. Zonke amakamelo isivakashi isici:
Zanikela egumbini ihhotela ngalinye kanye eshaweni. On Web sites, abanye o-opharetha ukuvakasha wawuthi emakamelweni leli hhotela zihlanganisa nesiqandisi. Nokho, ngeshwa, akusiyo. Emazwini abo mayelana ehhotela yakhe yangaphambili izivakashi ngokuvamile ukubalula ukuthi esiqandisini ifakiwe kuphela edilini lomshado. Futhi ukusetshenziswa kwaso badinga imali.
TV akude kuleli hhotela futhi kudingeka zingenise. Esikhathini eshaweni ehhotela, ngaphezu iqoqo elincane zokugeza khulula kanye hairdryer. Abaningi amakamelo ehhotela kukhona kuvulandi encane. Abakwazi omisiwe lolwandle izesekeli uma uthanda.
Fiorana Ihhotela 3 * (Rimini): Izibuyekezo yohwebo-e hotel yokuhlala
Njengoba leli hhotela isabelomali, ukuba nihlale lapha namuhla iningi izivakashi wathi zingavumi kakhulu. Ngokusho holidaymakers eziningi, empeleni Ihhotela Fiorana ehhotela kufanelekile akukho ngaphezu nje nichithe ubusuku lapha. Izindonga emakamelweni leli hhotela zipendwe ngemibala ezingemnandi ahlotshiswe futhi ifenisha isindala kakhulu hhayi sisekhaya. Zasendlini, efakwe emakamelweni, ngeshwa, ngokuvamile ahlahlele.
Hhayi ukhululekile kakhulu ehhotela izivakashi ukuthola leli hhotela, nanjengezihlambi. Ayikho amadokodo lapha, yebo, ingabonakali. Izakhamuzi bephoqeleka ukuba usebenzise i abavamile ukuthambisa ikani. Amanzi namadreni eshaweni nje imbobo phansi. Ngenxa dampness njalo zangasese futhi Liyashabalala kakhulu tile.
Izinzuzo ukuhweba-e lamakamelo ehhotela izivakashi zihlanganisa kuphela ukuthi ngokuvamile kuhle ahlanzekile. Nezincekukazi zigezwe kahle amakamelo. Okungenani akukho izimbungulu namaphela kuzo engakaze waphawula. Amathawula e eshaweni nelineni ku imibhede kule ehhotela nazo ehlanzekile ngaso sonke isikhathi esanele.
Ayikho Izinsiza ekhethekile ehhotela ezishibhile Ihhotela Fiorana 3 * (e-Italy, Rimini) kwezivakashi, yebo, singanikezwanga. Futhi akukho izindawo noma imishini eziqashisayo, akukho sikhungo ibhizinisi, hhayi ngisho isitoreji umthwalo. Ayitholakali lehhotela kanye pool. On Web sites, abanye o-opharetha ukuvakasha libike ukuthi kule ehhotela Ungayisebenzisa WiFi. Ukwahlulela nge izibuyekezo izivakashi, ngempela ehhotela. Kodwa awunazo, ngeshwa, akuzona zonke abaqashile.
Buka zezivakashi inkonzo ehhotela
Abasebenzi Ihhotela Fiorana 3 * (Rimini) e inethiwekhi, kukhona Izibuyekezo okuxubile. Ezinye izivakashi ukuthola abasebenzi ehhotela ngempela eziwusizo. Abanye ngeke nenhlanhla ebhekene luhlaza. Ngaphezu kwalokho, izivakashi eziningi ukusho ukudelela hhayi kuphela abasebenzi, kodwa abanikazi ehhotela ngokwabo.
Ububi main ehhotela iningi amaholide wathi, yebo, lenqwaba kwabokufika Afrika abahlala kuwo. Ingabe laba bantu esigabeni ababaleki futhi hlala 80% amakamelo ehhotela. Futhi ukuphila kwabo abantu okungenani 6 egumbini ngalinye. Afrika liziphathe umsindo kakhulu futhi iluhlaza. Futhi, izivakashi awuboni kubo kanye ukubhema utshani.
Ngu utshwala ngabasebenzi ngesikhathi abanikazi bayo, ngeshwa, kubuye kube ngempela abaqotho. Izisebenzi eziningi amahhotela ukukhonza izimenywa ngempela esisangulukisayo. Zinike, nahlulele by ukubuyekezwa abaqashile wangaphambili, lapho ingacamelisa collar emsebenzini futhi abanikazi ehhotela ngokwabo. Kuzo zonke izinhlobo amasayithi ikhambo ejensi izilinganiso zezivakashi ukunikeza leli hhotela akukho kuka 1-3.5 5.
Wakhonza ekamelweni lokudlela eziyinkimbinkimbi Fiorana 3 * ibhulakufesi iningi izivakashi kubhekwe omuhle kakhulu. Fed kule ehhotela ngempela esihlwabusayo. Uma wayefisa, ihhotela izivakashi kungathatha e lezitsha zalo ehla, ushizi, amasosishi amaqanda, nokunye. D. Kunikezwe ukudla ekamelweni lokudlela eyinkimbinkimbi ekahle kakhulu izivakashi "lezitsha". Uma kudingeka, ihhotela ungakwazi ukuqasha amakamelo kanye ibhulakufesi njengoba elula nge ibhodi nengxenye. Kulo mBhalo, izindleko izindlu izobandakanya kuhlanganise kwakusihlwa.
Ukudla kule ehhotela uhlale fresh futhi ehloniphekile, kodwa ezinye izimenywa usho ibhulakufesi namanje okuncane. Labo cha udla ekamelweni lokudlela, izivakashi abanolwazi belulekwa ukuba uvakashele eduze esitolo ehhotela "Billa". Kuyinto njalo kungenzeka ukuba uthole imikhiqizo izinga ngenani eliphansi.
Bonakalise ukuphila Afrika izivakashi ehhotela, ngeshwa, kungaba ekamelweni lokudlela. Ukudla bona asizwa ekamelweni elihlukile. Kodwa, ngeke abasaya enkantini nokungcebeleka izihambi ukuthatha emathileyi ukudla. Futhi-ke, ngezikhathi eziningi baqhube okungcono.
Izivakashi, owadubula ekamelweni Ihhotela Fiorana 3 * (Italy), ngokuvumelana abahambi ebona, phakathi kwezinye izinto, kufanele eduze iqaphe okungokwabo. Amagumbi ehhotela kukhona idiphozi ukuphepha amabhokisi. Nokho, ukukhokhela ukusetshenziswa yabo kuyadingeka ngokwehlukile. Ngaphezu kwalokho, lezi safes nazo encane kakhulu ngobukhulu. -Notebook kuzo, isibonelo, ayikwazi ukubeka. Kukhula ephephile edilini lomshado ehhotela umane asipheli. Ngakho-ke, zobuchwepheshe kanye nezinye izimenywa eziyigugu Ihhotela ngokuvamile kufanele athathe nawe izitolo, ogwini kuyiwe. Iqiniso ukuthi inethiwekhi Imininingwane kuhlanganise ukweba kule eziyinkimbinkimbi.
wonke Ugu ka Rimini kuhlukaniswe kwamamitha angu-50, okuyinto babe siqu izinombolo zabo serial. Ngakho-ke, eqondiswa abathandi beach kuleli dolobha kuyoba lula kakhulu.
Abobulili Amahhotela Fiorana 3 * (Rimini), njengoba sekushiwo, baningana ehlanzekile ukhululekile ebhishi yangasese. Nokho, ukuphumula ngenxa yezizathu ezisobala leli hhotela akuyona kakhulu abantu kahle. Ngakho-ke vakashela leli bhishi abaqashile ikhokhwe ihhotela ivelakancane. Ngokuyinhloko, izivakashi ukuya emphakathini. Mayelana nabo inethiwekhi Ubuye Izibuyekezo ezinhle. Shoreline Rimini ebanzi kakhulu (50 amamitha). Ngakho-ke, ngisho nalapho kwatheleka enkulu izivakashi izixuku amabhishi balapha abakaze. Yiqiniso, ukusebenza olwandle kuleli dolobha futhi zonke izinhlobo amathilomu nezindawo zokudlela. Lapha amaholide can kwasemini engabizi noma dinner. Izibuyekezo zalezi zikhungo kunethiwekhi ezinhle.
abathandi Beach - hhayi kuphela abahambi ukuqasha amakamelo ehhotela Ihhotela Fiorana 3 * (e-Italy, Rimini). Tours futhi uhlale lapha kaningi kakhulu ukuthatha baseRussia ngubani wanquma ukuvakashela e-Italy yezitolo.
Ukuze zonke izinhlobo engabizi eliphezulu izimpahla ehhotela izivakashi ngokuvamile hamba, yebo, maphakathi wholesale Gross. Ngu ubukhulu ishede, izivakashi eziningi, kufana idolobha langempela. izitolo Gross maphakathi ahlelwe imigqa, eduze komunye nomunye. Anikeza izivakashi a ton of amaqoqo ezintsha izingubo nezinye izimpahla. Uma wayefisa, lo isitokwe Ungathenga izikhwama, izicathulo, izingubo zangaphansi, nokunye. D. izimpahla lapha ngokoqobo elahliwe kuzo zonke izimboni e-Italy.
Gross ukuya izivakashi ehhotela Yiqiniso, unga futhi wena - ezokuthutha zomphakathi. Kodwa abahambi abanolwazi ukweluleka Wabasaqalayo ukuthenga zonke uhambo olufanayo ngaphambili lapha nge elikulesi sihloko. ukushaywa umoya kanjalo e Rimini ukunikela ejensi eziningi. Uthenge lolu hambo amaholide kufanele nje ukutshela maintainer mayelana nokuthi iziphi izinhlelo izinto ezithile bangathanda ukuthenga isitokwe.
Ngakho, nahlulele ngezibuyekezo zezivakashi, ihhotela kufanelekile Ihhotela Fiorana 3 * (Rimini), incazelo amakamelo nengqalasizinda iye enikezwa esihlokweni, ikakhulukazi kuphela linesizotha abathandi beach futhi kulabo ukuba Rimini ukuza bethenga. Izivakashi nezingane kanye nabantu abadala, noma kunjalo, lapha akukuhle ukuba abe matasa kuwo. Ngakho iholide-abenzi, kanye labo zisetshenziselwa kokuchitha isikhathi endaweni yokulala ngenduduzo, kufanele abheke phambili e Rimini kodwa nezinye ehhotela abanye.
Ihhotela Perla 3 * (Bulgaria, Golden Sands): izithombe kanye nokubuyekeza
Indlela ukukhetha izingubo iwebhusayithi